Ireny toeram-pampianarana tsy miankina ireny dia fehezin’ny lalàna momba ny hetra araka ny fepetra faritan’ny lalàna.
Raha io andininy faha 24 io, dia TSY MAINTSY mahavita ny ambaratonga voalohany (T9 na classe de 3ème) ny zaza malagasy rehetra, ary iantohan'ny fanjakana maimaimpoana. Tsy misy resaka fihantohana FRAM sy ramose daba ary saram-pisoratana anarana izany io, fa TSY MAINTSY mianatra ary raisin'ny fanjakana manontolo ny fampianarana ny zaza.
Ny fanadinana CEPE izany, dia tsy sivana fiakarana classe T6 na 6ème, rahateo ny zaza sahirana matetika no mianatra amin'ny EPP, ka nahoana no ho ferana lasa concours na fifaninana ny hiditra 6ème, ka misy ny famerana toerana hoe afaka CEPE - 6ème.
Mety tsy ampy hoy isika ny toerana eny amin'ny CEG hidiran'ny rehetra afaka CEPE. Tsy andraikitry ny ankizy na ny Ray amandreny izany, fa andraikitra teren'ny Lalampanorenana asa ataon'ny mpitondra, raha tsy izany dia fandikana Lalampanorenana ka afaka ahongana araky ny lalàna (Déchéance) ny mpitondra mandika Lalampanorenana.
Hafalifalian'ny Ray aman-dreny ve ny mahita ny zaza mahazo diploma voalohany amin'ny fiainana? Fitiavan-tena toy ireo Ray aman-dreny mividy ho anjanany kilalao tsy azony fony izy mbola kely izany, ka izy indray no tena milalao ilay kilalao, fa ilay zanany efa zavatra hafa ny kilalao tadiaviny.
Azo atao tsara izany ny manao tombana mandavan-taona na évaluation, ahitana ny fari-pahaizan'ireo mpianatra hatrany amin'ny taona faha 9 (T9 na 3ème), tsy ilana fanadinana ofisialy ara-panjakana, sady tsy manisy tsindry sy vesatra (Stress) ho an'ny ankizy izany, no tsy mandany volam-panjakana, ny vacation na karaman'ireo mpampianatra mpitsara fanadinana aza tsy voaloa akory hatramin'izao taona maro misesy.
Ny programam-pampianarana dia tokony hifandraika amin'ny filan'ny faritra tsirairay, hifanentana amin'ny asa tiana atao.
Ny fanofanana ireo mpampianatra amin'izay dia omena lanja manokana, ny karaman'izy ireo, ny trano honenany, ary ireo fanamboarana sekoly isam-pokontany.
Mila jeren'ny fanjakana manokana ihany koa ireo sekoly tsy miankina, ireo mpampianatra zara raha mahazo karama sahaza, satria tsy manana ny enti-manana ny sekoly. Asa sy adidin'ny fanjakana ny fampianarana ambaratonga fototra, sy ny fampianarana arak'asa, noho izany mila mandray andraikitra manampy ny sekoly tsy miankina, izay manao ny asany, ny fanjakana, fa tsy hoe seham-pihariana ny fampianarana ka mahatonga ny saram-pianarana midangana, ka ny manana ihany no misitraka fampianarana tsara, ny tsy manana lasa miandry omby, sy matsaka mitaon-drano.
Jerena ihany koa ny zotom-pon'ireo Ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny zanany, tokony ho hitany taratra fa ahazo tombontsoa ny zanany raha mianatra, fa tsy ahakivy azy ny hoe andaniana vola sy fotoana ampianarina ny zaza nefa dia tsy ahita asa, ka aleo avy dia mitaon-jezika manampy mamboly sy miompy.
Toerana be hazo, betsaka fitaovana fanamboarana trano sekoly, sy dabilio, misy aza amin'ny faritra manan-karena toa ny vanille, aleo ve ho fohana atao sigara ny vola vidin-davanila sa misy anamboarana ny trano sekoly sy dabilio hipetrahan'ny zanaky ny tena an-tsekoly, fa dia lasa ladina an-tany na hifanesika amin'ny dabilio tokana ny zaza 5.
Ekena fa andraikitry ny fanjakana ny manamboatra ny foto-drafitrasa, fa an'ny Ray aman-dreny sy ny mpampianatra kosa ny miaro sy mikojakoja ny sekoly ianaran-janany. Taratra ireny asa tanamaro ireny, ny olona ety ivelany indray no manadio ny sekoly, nefa ny mpianatra na ireo Ray aman-drenin'ny mpianatra tsy mandray anjara.
Efa anisanny fanabeazana amin'ny fidiovana sy fikojakojana ny fananana iombonana ny fanomezana andraikitra ny mpianatra, amboly hazo, hanao zaridaina, manadio lakilasy sy tokotany ary WC an'ny sekoly, fa tsy avela ho tany mena amovoka ka tsy mahasarika ny andeha hianatra.
Atao ahoana tokoa moa ny hijerena ireny sekoly mijoro isaky ny elakelan-trano ireny, na ny toerana malalaka hilalaovan'ny mpianatra aza tsy misy, fa trano fonenana an-davan'andro no hitarina havadika sekoly na Oniversité mihitsy aza ny an'ny sasany.
Ohatra mety azo jerena ny an'ny Amerikanina, tsy hijerena hoe sekolim-panjakana na sekoly tsy miankina, fa isaky ny zaza mianatra amin'ny sekoly iray, dia misy vola aloan'ny fanjakana amin'ilay sekoly, ka raha ratsy ny fampianarana, na ny vokatra, na ny fahitana asa aorian'ny fianarana, dia mihavitsy miala mifindra sekoly hafa tsaratsara tolotra ny mpianatra, dia mihena koa ny teti-bola omen'ny fanjakana ilay sekoly, ary misy fetra farany ambany ny isan'ny mpianatra amin'ny sekoly, ka raha latsaky ny fetra ny isan'ny mpianatra dia akatona ilay sekoly satria tsy nahomby. Any Etats-Unis rahateo na io Baccalauréat io aza tsy misy.
Inona tokoa moa no ilan'ny mpianatra manerana ny Nosy ny fampiasana ny Compas, ny Sinus sy Cosinus? Nefa ny fambolena vanille sy café ary ny akondro sy vary efa an-taonany maro tsy ampy ireo oniversité mampianatra azy? Hatreto dia mbola manondrana vanille sy litchi ary girofle ambongadiny isika, tsy misy akory mba ozinina mamadika izany ho lasa parfum, na essence na extrait, na confiture na jus.
Ny fotoana fihibohana tahaka izao no fotoana handinihina ny ho avy, hametrahana ny lamina vaovao mety eto amin'ny firenena, raha tsy izany dia fatiantoka fotsiny ny tsy nisian'ny fampianarana raha ny teo aloha ihany no tohizana toy ny tsy nisy ilay valanaretina.